I-Casa ToToRo-igumbi labucala elijongene negadi - I-Airbnb
I-Casa ToToRo-igumbi labucala elijongene negadi
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguAugusto
I-COVID: ICasa totoro yindlu enyanyekelwa lusapho eneendawo ekwabelwana ngazo. Ngenxa yonxunguphalo siye sagqiba ekubeni sinikeze inkuthazo yokuhlala ixesha elide kwaye sicela iindwendwe zethu ukuba zizinakekele kwaye zilandele iingcebiso zococeko. Nceda ubuze into oyifunayo phambi kokuba ubhukishe.
Iziko lembali, imarike ephambili, iindlela zokuhamba, iikhefi kunye neevenkile zikufuphi kakhulu nendlu yethu. Izithuba zikhulu. Ikhitshi enezixhobo. Sinegadi, ithala kunye nethafa eluphahleni.
Sifuna uzive usekhaya xa ufika kwindawo yethu. Ukuba unokupheka nantoni na oyifunayo, ukuba ungene ngexesha othanda ngalo ... konke phantsi kwe-atmosphere yentlonipho kwaye kwangaxeshanye ukuthembela kunye nokhuseleko lokuziva uxhaswa kwinto onokuyidinga ngokuhlala kwakho kuthi.
Lo mmandla uzolile kwaye ukhuselekile, unezindlu ezintle ezindala. Imyuziyam yaseNah Bolom ikufutshane nje kwaye ukusuka kwindawo esikuyo unokufikelela ngokulula kuzo zombini iindlela zokuhamba, icawa yaseGuadalupe, okanye iSanto Domingo apho imarike yamagcisa kunye nemyuziyam yelaphu ikhona!
Siyafumaneka ukukucebisa malunga nesixeko kunye neendawo ezisingqongileyo!